Quartz စျေး - အွန်လိုင်း QTZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Quartz (QTZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Quartz (QTZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Quartz ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Quartz တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Quartz များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
QuartzQTZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.006QuartzQTZ သို့ ယူရိုEUR€0.00507QuartzQTZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00459QuartzQTZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00546QuartzQTZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0534QuartzQTZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0378QuartzQTZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.132QuartzQTZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0223QuartzQTZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00794QuartzQTZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00837QuartzQTZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.134QuartzQTZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0465QuartzQTZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0326QuartzQTZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.449QuartzQTZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.01QuartzQTZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00823QuartzQTZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00914QuartzQTZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.186QuartzQTZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0417QuartzQTZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.641QuartzQTZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.11QuartzQTZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.31QuartzQTZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.441QuartzQTZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.165
QuartzQTZ သို့ BitcoinBTC0.0000005 QuartzQTZ သို့ EthereumETH0.00002 QuartzQTZ သို့ LitecoinLTC0.00011 QuartzQTZ သို့ DigitalCashDASH0.00007 QuartzQTZ သို့ MoneroXMR0.00007 QuartzQTZ သို့ NxtNXT0.468 QuartzQTZ သို့ Ethereum ClassicETC0.000884 QuartzQTZ သို့ DogecoinDOGE1.73 QuartzQTZ သို့ ZCashZEC0.00007 QuartzQTZ သို့ BitsharesBTS0.185 QuartzQTZ သို့ DigiByteDGB0.192 QuartzQTZ သို့ RippleXRP0.0213 QuartzQTZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000207 QuartzQTZ သို့ PeerCoinPPC0.0199 QuartzQTZ သို့ CraigsCoinCRAIG2.73 QuartzQTZ သို့ BitstakeXBS0.256 QuartzQTZ သို့ PayCoinXPY0.105 QuartzQTZ သို့ ProsperCoinPRC0.753 QuartzQTZ သို့ YbCoinYBC0.000003 QuartzQTZ သို့ DarkKushDANK1.93 QuartzQTZ သို့ GiveCoinGIVE13 QuartzQTZ သို့ KoboCoinKOBO1.37 QuartzQTZ သို့ DarkTokenDT0.00553 QuartzQTZ သို့ CETUS CoinCETI17.33